विश्वकपमा बोतलको जर्सी « नेपाली मुटु
« तपाईंलाई ब्रस गर्न आउँछ ?
सुरु भयो विश्वकप »
विश्वकपमा बोतलको जर्सी
Posted by नेपाली मुटु on June 11, 2010
तपाईलाई थाहा छ, विश्वकपमा खेलाडिहरुले कस्तो कस्तो जर्सी लगाउँछन् ? विगतमा विश्वकपले देखाईसकेको छ यो मात्र फुटबलको पर्व होइन । यसले फेसनको संसारमा पनि निकै ठुलो अर्थ बोक्छ । अब बिस्तारै हाम्रो गाउँ शहरमा पनि विश्वकपको ज्वरो पस्नेछ । अनि विश्वकपमा सहभागी आफ्ना रोजाईका मुलुकको जर्सी लगाएर हिड्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ । तपाईलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्दछ, कुन देशको जर्सी कस्तो छ ।
यो कु्रा जर्सीको रङ्गको कु्रा होइन । यसपाली ब्राजिल, नेदरल्याण्ड र पोर्चुगलका खेलाडीहरु पुराना पानीको बोतललाई पुनःप्रसोधन गरेर बनाईएको जर्सी लगाएर मैदानमा देखिनेछन् । सरदर आठ बोतलबाट बनेको यो जर्सी अरु जर्सी भन्दा १३% बढि पसिना सोस्न सक्ने बताईको छ । यसलाई बनाउँने काम गरेको छ, एसियाली मुलुक ताइवानले ।
ताइवानको यो कदमलार्ई हामीले खुलेर सर्मथन गर्ने होइन त ? बरु मिल्छ भने हाम्रो पुरानो पानीको बोतल पनि ताइवान लगिदिने हो कि ? हामीलाई ८० वटा बोतलको एउटा जर्सी दिए पनि हुन्छ ।
This entry was posted on June 11, 2010 at 10:14 pm	and is filed under विश्वकप बिशेष. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.